China umculo omtsha wonwabele iseti yentloko iseti-S9 XR ukwenziwa kunye nefektri | NUEVASA
I-iPhone 11 Pro ine-IMD enye ezantsi enee-anti-shells ezintathu
Isizukulwana sikaKei Shadow iP 11 Pro Max CD eprintwayo
Isizukulwana sikaKei Ying Red Mi K30
Isizukulwana seKei Shadow iP 11 ...
Umculo omtsha uyonwabele intloko ...
IPhone 11 Pro inenye ...
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-S9 XR
Amanqaku okuqaphela kwimidlalo yentloko:
Nika ingqalelo indlela iseti yentloko enxitywe ngayo, kwaye ukhethe uyilo olunokubanokuwela kancinci
Ukushukuma komzimba ngexesha lokubaleka kunokubangela ukuba ii-earphone ziwe. Ke ngoko, intuthuzelo kunye nokuqina kubaluleke kakhulu xa unxibe zona. Into mna
Uhlobo lwendlebe: uninzi lwamanqaku enkxaso, ulungiso lwee-earplugs ezifanelekileyo
Okwangoku, zimbini iindidi eziphambili zee-earphone ezilungiswe ngumsele wendlebe. Olunye luhlobo lwe-earplug apho umngxunya wesandi ubekwe kwindawo yomqala, kwaye enye iluhlobo lwendlebe apho i-earplug yendlebe ibekwe ngqo kumjelo wendlebe wangaphandle. Nangona zombini ii-earphone zisebenzisa i-ear canal structure ukulungisa i-earphone, i-earplugs ezithambileyo ezisezindlebeni zinokulungela imijelo yeendlebe zeemilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, kwaye uzinzo olungcono lungcono. Ke ngoko, ukuba uncamathisela ukubaluleka kokunxiba uzinzo kwaye ufuna ukuthintela ukukhulula iingxaki ngexesha lokuzilolonga, kuyacetyiswa ukuba ukhethe uhlobo lwendlebe.
Uhlobo lwe-Earhook: ukunxiba uzinzo kuphucula, ukuzilolonga ngokukhululekileyo
Nangona ii-earbuds kunye nee-headphone ezisezindlebeni zinozinzo oluphezulu xa zinxityiwe, ngokuqinisekileyo ziya kukhululeka xa zijika okanye zijiwuzisa iintloko. Ukuba nawe unale ngxaki, kuyacetyiswa ukuba ukhethe "umlobothi wendlebe" ngentambo. Isitayile sentloko
Ukongeza kulwakhiwo lweendlebe ngokubanzi, olu hlobo lwentloko luyakuxhotyiswa ngehuku, ukuze iseti yentloko ixhonywe kumphandle wangaphandle njengeglasi; Ngale ndlela i-headset ayinayo kuphela inkxaso ye-earplug ngokwayo, kodwa ineempembelelo zokulungisa ezincedisayo. Uzinzo lungcono ngokwendalo kunee-earbud eziqhelekileyo. Ngapha koko, uhlobo lokuloba indlebe lunokusetyenziswa kuzo zonke iintlobo zeendlebe, ngaphandle kweziphene ezixhaphakileyo zohlobo lwendlebe kunye neendlebe ezingahambelaniyo nendlebe. Kuyacetyiswa kubafundi abaxabisa ukunxiba intuthuzelo.
Iifowuni zeendlebe ezinokuphinda zibonwe sisandi esibi xa sinxityiwe
Ukuba indawo yokubaleka yindlela okanye indawo enabanye abantu kunye nezithuthi, nceda ukhethe iseti yentloko enokuva isandi sokuma emva kokuyinxiba. Oku kulandelayo kuya kwazisa iindidi ezintathu zee-headphones ekusebenziseni ngaphandle, ukuze wonke umntu anciphise uluhlu lokukhetha.
Egqithileyo Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-R100
Okulandelayo: Umculo omtsha wonwabele iseti yentloko-i-C500 kunye
Ibhloko yentloko yeBluetooth
Iiseti zentloko zeBluetooth
Isibonisi seBluetooth esingabonakaliyo
Iselfowuni yeBluetooth yentloko
I-Ps4 Iseti yentloko kuvavanyo lwendlebe
I-Razer Headset kwiNdlebe
I-Razer Endlebeni yeBluetooth
Iseti yentloko ebuyiselweyo yeBluetooth
Incinci iBlue Earpiece
Umculo omtsha uyonwabele i-headset-c700
Umculo omtsha uyonwabele i-headset yentloko-X1
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-E600
Umculo omtsha uyonwabele i-headset yentloko-C4
Imodeli yentloko yentloko yestiriyoC3
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-R100
1121 Yongjun Road, Yiwu City, Jinhua City, Zhejiang kwiPhondo